BLOG Archives - Page2of6- Postmandu
सपना पूरा गर्न घर छोडेर हिडेकि म, मलाई के थाहा थियो र कि कुनै दिन घर फर्किन पाउनु नै मेरो सपना बन्ला भनेर। जीवनको ब्यस्ततालाइ विश्राम दिदै आज आफ्नो लागि के थोरै समय निकालेकी थिए, मेरा आँखा त मलाई पत्तै नदिइ रसाउन भ्याइसकेका रहेछन् अनि फेरि आँसु पुछ्दै टोलाइरहे म, त्यो बाल्यकाल सम्झेर। घडीको सुइरोको […]
संकटको समयमा सहयोगः विश्वम्भर घिमिरे
2020-03-26 2020-03-26 PostmanduLeaveaComment on संकटको समयमा सहयोगः विश्वम्भर घिमिरे
काठमाडौं । ”महामारीको रुपमा फैलिरहेको प्राणघातक कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण अहिले सारा विश्व नै संकटमा छ । एउटा नागरिकका हिसाबले देशमा बिपत अवस्था आइलागेको यो घडीमा सहयोगी बन्न सक्नु नै महानता हुन सक्छ । त्यसैले यो पूण्य कार्यमा आफ्नो बुताले भ्याएसम्म सहयोग गर्न अपिल गर्दछु । सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको अभियानको सहयोग गर्न चाहनेले […]
2020-02-22 2020-03-01 PostmanduLeaveaComment on Life is more in real than reel
That small village girl fromamiddle class family was onceachild whose world was limited to lap of parents and those four corners of home.The only dream she had wasahappy life with her family. Time changed,so did her perceptions of seeing the world.slowly,her limitations in life turned to freedom of living.she […]
2019-11-20 2019-11-25 PostmanduLeaveaComment on फूल दिवस
चिरञ्जिवी कोइराला झुल्के घामको किरणको स्पर्श संगै उसमा उर्जा थपियो। माटोमा आधा पुरिएका पात र डांठहरु बिस्तारै वौरिन लागे । बाहिर चोटै चोट थियो तर साहसमा कुनै कमि थिएन । किनभने यो घटना उसको लागि पहिलो पनि थिएन । रातभरी परेको असिनापानि को प्रहार पछि दोबाटोमा फुल्ने त्यो गुलावको अवस्था यस्तै भइ रहन्थ्यो वेलावेलामा । […]
2019-11-12 2019-11-28 PostmanduLeaveaComment on ‘सम्बन्ध अनि सत्यता’
कविता व्यवहार केही जानेकी छैन, सम्झाको केही मानेकी छैन। कति ठूलो गुनासो थियो है तिम्रो ? जब म तिम्रो सामीप्यतामा पुलपुलिएकी थिएँ यादै छैन आमा, मलाई माफ गरिदेऊ अन्जानमा कति हो कति दुःख दिए। कति मन दुखाएछु है तिम्रो ? आज घर छोडि टाढा पठाईदियौ आफ्नो मन त थाम्यौ आमा तर तिम्लाई छोडेर हिँड्दै गरेका, […]
2019-09-29 2019-11-12 PostmanduLeaveaComment on ‘आजको समाज’
आज भोगाइमा तड्पिदै छ मान्छे क्षणभरको संसारमा झुलिदै छ मान्छे लाचारतामा हराउदै छ मान्छे सुखको खोजीमा भौतारिदैछ मान्छे अनि त-त र म-म को लडाइँमा आफैले आफुलाइ भुल्दैछ मान्छे म भन्छु त्यस्तो ठाउँमा आखिर रोएर के गर्छौ ? जहाँ, तिम्रो आँशुको अर्थ रहन्न त्यो सञ्जालमा आखिर अल्झिएर के गर्छौ ? जहाँ तिम्रो त्यागको कुनै कदर हुँदैन […]